'Akukho Mboniso' Isipho soMtshato-Imibono Egqwesileyo | Bezzia
Isipho somtshato 'akukho kuzimasa': Ezona zimvo zilungileyo
USusana godoy | 16/06/2022 16:00 | Umtshato
Ukuba ucinga ukunika isipho somtshato 'esingabonisi' kuba ngenene awuzukwazi ukuzimasa, ke sikushiya nothotho lwezimvo ezigqibeleleyo.. Ukuba ngokwayo ngamanye amaxesha kubuhlungu bentloko ukucinga malunga nokuba yintoni esiza kuyinika xa sisiya emtshatweni, ngokuchaseneyo, kusizisa ihlabathi lamathandabuzo. Ngokuqinisekileyo sikhethe ukhetho olugqibeleleyo.
Yonke into iya kuxhomekeka ekubeni uyazi kakhulu okanye kancinci malunga nokuthanda kwesi sibini. Kuba kusoloko kungumbono olungileyo ukudubula indlela efana naleyo. Kodwa ukuba akwenzeki kuwe, ungakhathazeki kuba kukho iimbono onokukhetha kuzo. Ndimele ndinike ntoni xa ndingayi emtshatweni? Ngomnye weyona mibuzo iviwa kakhulu kwaye namhlanje uya kuba neempendulo ezahlukahlukeneyo kuyo.
1 Isipho somtshato 'akukho kuzimasa': ibhokisi yamava
2 Hlawula ezinye zezinto zakho ezibalulekileyo
3 Ipakethi yeebhotile ezenzelwe wena
4 Isimanga sesidlo sakusasa ekhaya
5 Iinkcukacha zokuhlobisa
Isipho somtshato 'akukho kuzimasa': ibhokisi yamava
Ngokuqinisekileyo sele uyazi ezo bhokisi zifana nokulahleka kumava awodwa. Kwelinye icala kukho apho unokukhetha ubusuku okanye ezimbini, kunye nesidlo sakusasa okanye isiqingatha sebhodi. Ukongeza, iindawo ekuya kuzo zinokwahluka kakhulu kwaye ngeli xesha kuya kuba sisibini ukuba sigqibe apho. Ukongeza kubusuku behotele, kukwakho namava e-spa, kunye nonyango olubandakanyiweyo okanye ukukwazi ukungcamla uthotho lokutya kunye notyelelo olunezihloko ezininzi. Kukho izimvo ezingapheliyo, ke kuya kufuneka ukhethe enye ehambelana noko kukuthanda komtshakazi nomyeni. Ukuze wenze ibhalansi malunga nemali oza kuyityala, cinga ngesiqingatha onokuthi usinike ukuba uye emtshatweni. Kukukunika umbono!
Hlawula ezinye zezinto zakho ezibalulekileyo
Xa ubuhlobo buyinto ethandwa nguwe, usoloko ufuna ukuba babe nenkumbulo ngawe ngolo suku lukhethekileyo. Kunjalo ngoba, unokuhlawula isiqingatha sezinye zezinto ekufuneka umtshakazi okanye umyeni azithenge. Ngokomzekelo, izivumelwano, i-bouquet okanye izinto ezifanayo. Yindlela yokutyala imali obuza kubanika yona okanye obunokuthi uthenge ngayo enye inkcukacha abangayidingi kangako. Nangona basenokunikela ingqalelo kuthi, ngokuqinisekileyo ngokuyithetha baya kukwazi ukuyiqonda.
Ipakethi yeebhotile ezenzelwe wena
Ngokuqinisekileyo oko emva komtshato, kwaye bakuba befikile bevela kwi-honeymoon, baya kukumema ekhaya ukuze ukhumbuze ngosuku olukhulu.. Ke, akukho nto ingcono kunokubanika ipakethi yewayini okanye i-cava. Kukho abo bazisa neziselo ezimbalwa kwaye ngokuqinisekileyo inokuba yinkcukacha egqibeleleyo. Nokuba ezi glasi zinokukrolwa kwaye isitika esihle esinomfanekiso womtshato sinokufakwa kwiibhotile. Namhlanje kukho iiwebhusayithi ezininzi ezizihoyileyo. Ke ngeenkqubo ezilula ungayenza ngaphandle kweengxaki ezinkulu.
Isimanga sesidlo sakusasa ekhaya
Mhlawumbi ayisosipho sinjalo, kodwa siyamangalisa. Ngamanye amazwi, xa sithetha ngesipho somtshato 'sokungabikho', sinokunikezelwa ngezizathu ezahlukeneyo. Ngamanye amaxesha ngenxa yokuba singenako ukuhamba ngenxa yokuzinikela okuthile, kwamanye amaninzi ngenxa yemicimbi yezoqoqosho. Ngoko ke, umntu ngamnye kufuneka alungelelanise uhlahlo lwabiwo-mali lwakhe. Kungoko bothuse ngokuqesha enye yesidlo sakusasa somntu abaza kugoduka nabo ngaphandle kokwazi isibini, sisenzo esimnandi esiza kubenza bonwabe..
Ekugqibeleni, sinokuwela kwezona ngcamango ziqhelekileyo, kodwa akufuneki sizishiye ecaleni ngenxa yoko. Ingaba uhombisa ikhaya lakho okanye akunjalo, inkcazo yokuhlobisa inokuhlala iyindlela efanelekileyo. Omnye umzobo okanye iwotshi yodonga, kunye nezibane ezincinci iitafile ezisecaleni kwebhedi. Iiracks zengubo yendawo yokungena nayo iyindlela ebalulekileyo kwaye ngokuqinisekileyo, iitreyi ukwenzela ukuba bathathe isidlo sakusasa ukuya kulala. Udla ngokunika ntoni xa ungayi emitshatweni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Umtshato » Isipho somtshato 'akukho kuzimasa': Ezona zimvo zilungileyo
Iingcamango zokudibanisa ifenitshala endala kunye nesimanje